ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ရိုးရာအမွေ (၂) သို့မဟုတ် ဘုန်းကံတက်အောင်
ရိုးရာအမွေ (၂) သို့မဟုတ် ဘုန်းကံတက်အောင်
ရှေးမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာများဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုကို အခြေခံပြီး ချမှတ်ကာ ဆွေစဉ် မျိုးဆက်လိုက် လိုက်နာခဲ့ကြရတဲ့ ထုံးတမ်း စဉ်လာများ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုလိုနီခေတ်မှာ မြန်မာ့ ထုံးတမ်း စဉ်လာ များကို နှိပ်ကွပ်မည် စိုးသောကြောင့် ဖြစ်စေ၊ တိုင်းတပါးသားများ ရရှိသွားမည် စိုးသောကြောင့် ဖြစ်စေ ဖုံးကွယ်လျှို့ဝှက် ထားခဲ့ကြရာမှ အချို့ထုံးတမ်းစဉ်လာ များ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ရပါတယ်။ ပုဂံရာဇ၀င်မှာ ထင်ရှားတဲ့ အနော်ရ ထာ မင်းရဲ့ ဖခမည်းတော် ကွမ်းဆော် ကြောင်ဖြူမင်းဟာ ရုက္ခစိုးနတ်မင်းက အကြံပေးတဲ့ အတိုင်း အနုဿတိ ၁၀ပါးကို နေ့စဉ် ပုံမှန်ပွားများခဲ့လို့ ဘုန်းကံ တက်လာပြီး တောင်သူကြီးမင်း အလိုလိုနန်းကျချိန်မှာ အဖိုးအိုဟန်ဆောင်သူ သိကြားမင်း ဆက်သတဲ့ မင်းဝတ်တန်ဆာကို ဆင်မြန်းပြီး နန်းသိမ်းပွဲခံကာ မင်း အဖြစ်ကို ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောင်မင်း အဆက်ဆက်ကလည်း အနုဿတိ ၁၀ပါးကို ပွားများခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းကို ပြန် ကြည့်ရင် မင်းဆက်တိုင်းက မင်းများဟာ သူတို့ယုံကြည်စွာ ရွတ်ဆိုတဲ့ ဂါထာ သို့မဟုတ် ကျင့်စဉ်တစ်မျိုးစီ ရှိကြပါတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ မင်း အဖြစ်ကို မရည်မှန်းရင်တောင် သည်အနုဿတိ ၁၀ပါးကို ပုံမှန်နေ့စဉ် ပွားများ ရင် ဘုန်းကံတက်ခြင်း၊ နတ်များချစ်ခင်ခြင်းနဲ့ အန္တရာယ်ရှိခါနီးခဲ့ရင် နတ်များက သတိပေးတားမြစ်ခြင်း စတဲ့အကျိုးများကို လက်တွေ့ ခံစားရ တတ်ပါတယ်။ ပါဠိ စကားကြီးနဲ့မို့ ခက်မယ် ထင်သူများအတွက် သည်လိုပွားများဖို့ ဘယ် လောက် လွယ်တယ် ဆိုတာကို ပြောပြပါမယ်။ အနုဿတိ ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ ပွားများခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁. ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ----ဘုရားဂုဏ်တော်ကို ပွားများခြင်း
၂. ဓမ္မာနုဿတိ----တရားဂုဏ်တော်ကို ပွားများခြင်း
၅.ဒေ၀တာနုဿတိ----နတ်တို့ဧ။်အကျင့်နှင့် တူသောအကျင့်ကို ပွားများခြင်း
၆.ခန္ဓာနုဿတိ----မိမိခန္ဓာကိုယ်ဧ။် အပြစ်ကိုရှုခြင်းကို ပွားများခြင်း
၇.ဝေဒနာနုဿတိ----အေးမှုပူမှုစသော ခံစားမှုတို့ကို သတိမူခြင်းကို ပွားများခြင်း
၈.မရဏာနုဿတိ----သေခြင်းတရား မိမိနှင့်နီးကပ်မှုကို သိခြင်းကို ပွားများခြင်း
၉.စာဂါနုဿတိ----မိမိဧ။် ကောင်းသောအကျင့်ကို ပွားများခြင်း
၁၀.ဥပဿနာနုဿတိ----နိဗ္ဗာန်ဧ။် ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အဖန်တလဲလဲ ပွားများခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သည် အနုဿတိ ဆယ်ပါးကို မျက်နှာသစ်ရင်းနဲ့ ပြီးမြောက်အောင် ပွားများပုံကတော့မျက်နှာသစ်မယ့်ရေခွက်ကို ရေအပြည့်နဲ့ခပ်ယူ ကိုင်မြှောက်ရင်း မြတ်စွာဘုရား ကို မျက်နှာသစ်တော်ရေ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းနေဟန် အာရုံမှာ ရည်မှန်းပြီး ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ လို့သုံးကြိမ် ရွတ်ဆို ပါ။ ပြီးရင် မြတ်စွာဘုရားထံက ရေတော်ပြန်စွန့်ဟန် အာရုံယူပါ။ သည်အချိန် မှာ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ---- ဘုရားဂုဏ်တော်ကို ပွားများခြင်း၊ ဓမ္မာနုဿတိ ----တရားဂုဏ်တော်ကို ပွားများခြင်းနဲ့ သံဃာနုဿတိ ---- သံဃာဂုဏ်တော်ကို ပွားများခြင်း ဆိုတဲ့ အနုဿတိ ၃ပါးပွားပြီးဖြစ်ပါပြီ။ ထို့နောက် မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေကိုလက်ပေါ် အနည်းငယ်လောင်းချရင်းနဲ့ သည်ရေ သန့်ရှင်းကြည်လင် အေးမြသလို သတ္တ၀ါခပ်သိမ်းတို့ရဲ့ နှလုံးစိတ်ဝမ်း သန့်ရှင်းကြည်လင် အေးမြကြပါစေလို့ မေတ္တာပို့ပါ။ ဝေဒနာနုဿတိ ---- အေးမှု ပူမှု စသော ခံစားမှုတို့ကို သတိမူခြင်းကို ပွားများခြင်းနဲ့ မေတ္တာ နုဿတိ ---- မေတ္တာကို ပွားများခြင်း ဆိုတဲ့ အနုဿတိ နှစ်ပါး ထပ်မံ ပွားများပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အနုဿတိ ငါးပါး ပွားရတာ ဘယ်လောက် များ လွယ်ကူလိုက် ပါသလဲနော်။ သည့် နောက်တော့ မနက်တိုင်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သန့်စင်ဆေးကြော နေသော် လည်း မိမိရဲ့ခန္ဓာဟာ အမြဲပြန်လည် ညစ်ပေလာလို့ နေ့စဉ်မျက်နှာသစ် နေရတာကိုသတိရပြီး ငါ့ခန္ဓာ ဟာ မမြဲပါလား လို့ ရှုပွား သုံးသပ် လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာနုဿတိ---- မိမိခန္ဓာကိုယ်ဧ။် အပြစ်ကိုရှုခြင်း ကိုပွားများခြင်း တစ်ရပ် ပြီးမြောက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သည့်နောက် မိမိသက်ရှိထင်ရှား ရှိနေလို့သာ မျက်နှာသစ်ဖို့ လိုတာဖြစ်ကြောင်း သတိရပြီး အသက်ဆိုတာ ကွေးသောလက် မဆန့်မီ ဆန့်သောလက်မကွေးမီ သေဆုံးတတ်တာမို့ လက်ရှိအချိန်လေးကို သတိနဲ့နေပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုသင့်ကြောင်း ဆင်ခြင်စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ မရဏာ နုဿတိ--- သေခြင်းတရား မိမိနှင့်နီးကပ်မှုကို သိခြင်းကိုပွားများခြင်းနဲ့ စာဂါနုဿတိ--- မိမိဧ။် ကောင်းသော အကျင့်ကို ပွားများခြင်း တို့ ပြီးမြောက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် မြတ်စွာဘုရားကို မျက်နှာသစ်တော်ရေ ကပ်လှူလိုက် ရတဲ့ မိမိရဲ့ ကုသိုလ်ကိုထပ်မံ အာရုံပြုပြီး နတ်ဒေ၀တာများကို ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ အမျှပေးဝေလိုက်တဲ့အခါ ဒေ၀တာနုဿတိ ---- နတ်တို့ဧ။်အကျင့်နှင့် တူသောအကျင့်ကို ပွားများခြင်း ပြီးမြောက်ကာ သည်လို ပွားများခြင်း ကြောင့် နိဗ္ဗာန် ရောက်သည့် ကိုယ် ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း သံသရာ ငြိမ်းကြောင်း ဖြစ်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုလိုက်ပါက ဥပဿနာနုဿတိ ---- နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံ ပြုကာ အဖန်တလဲလဲ ဖြစ်အောင် ပွားများခြင်း တို့ပြီးမြောက်ကာ အနုဿတိ ဆယ်ပါး ပွားများခြင်း ပြီးမြောက်ပါတော့တယ်။ အနုဿတိ ဆယ်ပါးပွားမှု ကြောင့် စိတ်ချမ်းသာ လုံခြုံသွားတာကြောင့် ကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့တင် လူချစ်လူခင်များတာ ပြောစရာမလိုအောင်ပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မကောင်း မှု မလုပ်ဖြစ်အောင် သတိပေးပြီးသား ဖြစ်သွားတာကြောင့် ကုသိုလ်အကျိုး ပေးဖို့လည်း သိပ်လွယ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်တိုင်း မျက်နှာသစ်တိုင်း သတိလေးတစ်ချက် ထားလိုက်ရုံနဲ့ ကုသိုလ်ဆယ်မျိုး ဆယ်ခါရပြီးဖြစ်တာမို့ သတိလေး တစ်ချက် ထားကြရအောင်လားရှင်။ ကျွန်မရဲ့ ရေချိုးခန်းကို စာရှုသူတို့ လာကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင် မျက်နှာသစ်တဲ့ ကြွေခွက်ရှေ့က မှန်မှာ စီဒီပြားပေါ်မှာ စာရေးတဲ့ မှင်မပျက်နိုင်တဲ့ ဆော့ပင်နဲ့ အနုဿတိ ဆယ်ပါး ပွားရန်လို့ ရေးထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်။ နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းတိုးတက် အောင်မြင်ကြပါစေ။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 1:49 AM